कोरोनाविरूद्धको लडाइँ सोचेभन्दा लामो हुनसक्ने ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाविरूद्धको लडाइँ सोचेभन्दा लामो हुनसक्ने !
बुटवल, वैशाख १८ सम्म कोरोना शून्य रहेको प्रदेश ५ मा वैशाख १९ गते पहिलो पटक दुई सङ्क्रमित फेला परे, रूपन्देही र बाँकेमा । त्यसको ११ दिनभित्र यो प्रदेशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७० पुग्यो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरू भन्छन्, सङ्क्रमितको सङ्ख्या अरू बढ्नेछ किनभने परीक्षणको दायरा बल्ल फराकिलो बनाइएको छ । मङ्गलबार एकै दिन मात्र यहाँ १७ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिए । तीमध्ये नेपालमा पहिलो पटक कपिलवस्तुमा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत सङ्क्रमण देखियो । अहिलेसम्म यो प्रदेशका रुपन्देही, बाँके, कपिलवस्तुमा बढी सङ्क्रमित देखा परेका छन् । अरू जिल्ला पनि जोखिमको सूचीमा छन् ।
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण नहुँदै सार्वजनिक र सामूहिक कार्यक्रम निषेध गरेको यो प्रदेशमा एकाएक सङ्क्रमण फैलिनुमा केही विशेष कारण छन् । सबैभन्दा धेरै अर्थात् झन्डै चार सय किलोमिटरको खुला सीमा व्यवस्थापनमा जनशक्तिको अभाव, भारतीय पक्षले नेपालीलाई पठाउने प्रवृत्ति, अरू प्रदेशको तुलनामा परीक्षण गर्नुपर्ने धेरै व्यक्ति, परीक्षण किटको अभाव रहेको छ । अहिलेसम्म सङ्क्रमण पुष्टि भएका अधिकांश दुवै देशमा जारी लकडाउनकै बीच लुकिछिपी नेपाल भित्रिएको जिल्ला प्रशासनले पुष्टि गरेको छ ।
सबै प्रदेशको तुुलनामा यो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् पाँच हजार ५७४ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म तीन हजार ८१२ जनाको स्वाब सङ्कलन भएकामा दुई हजार ५६३ जनाको नतिजा आएको छ । तीमध्ये ७० जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिए । एक हजार २४९ जनाको नतिजा आउन बाँकी छ ।
थपिनेको परीक्षण झन् चुनौतीपूर्ण छ किनभने सुनौली नाकामा मात्र अलपत्र झन्डै दुई हजार नेपाली स्थानीय तहहरूको पहलमा मुख्य नाकाबाट नेपाल भित्रिँदैछन् । उनीहरूको पनि परीक्षण गर्नु छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमाशङ्कर चौधरीका भनाइमा परीक्षणको दायरा बढेकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्नेछ । उहाँका भनाइमा भयावह अवस्था आउन नदिन अनेक आकस्मिक रणनीति अपनाइएको छ । बुटवलस्थित
कोरोना विशेष अस्पताललाई
५० बाट दुई सय बेडमा बिस्तार गरिँदैछ । बाँकेको अस्पतालमा पनि एक सय बेड बिस्तार गरिँदैछ । किट आएकाले अब परीक्षण पनि
तीव्र भइरहेको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “खुला सीमा, भारतीय पक्ष जस्ता कारणले सङ्क्रमितहरू बढिरहे पनि अब परीक्षण तीव्र भएको छ । चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ”
क्वारेन्टाइनमा रहेका ठूलो सङ्ख्याको परीक्षण अझै बाँकी छ । थपिनेहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दैछ । अबको उपाय के ? मन्त्री बरालको भनाइ छ, “सीमामा कडा व्यवस्थापन गरिनेछ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र उपचारलाई पनि तीव्र बनाइँदैछ । चिन्ता लिनु भने पर्दैन । ”
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सार्वजनिक अपिल गर्दै भन्नुभएको छ, “कोरोना सङ्क्रमित पत्ता लाग्नु सुरक्षित हुनु हो । सचेत बनौँ, त्रसित नहोऔँ । लकडाउनमा पनि कृषिकर्म र उत्पादनकर्ममा जुटौँ । लडाइँ लामो हुनसक्छ । ”
महादेवको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस आज भाद्र १७ गते बुधबारको राशिफल !